ပွၚကညီဖိခြါအံၚယ ဟဲလ႕တႈအ႕ဥအပူၚယ အိဥဒီးအစိအကမီၚယ ဒီးအလၚဒိဥအကပီၚထီန႔ဥလီၚ (Lk 21: 20-28) (၂၅.၁၁.၂၀၂၁) | Radio Veritas Asia
ပွၚကညီဖိခြါအံၚယ ဟဲလ႕တႈအ႕ဥအပူၚယ အိဥဒီးအစိအကမီၚယ ဒီးအလၚဒိဥအကပီၚထီန႔ဥလီၚ (Lk 21: 20-28) (၂၅.၁၁.၂၀၂၁)
တနံၚအံၚယမ့ႈ၀ဲဒဥ (25.11.2021) န႔ဥလီၚ.မ့ႈလ႕တနံၚအံၚခရံဏအလံဏတႈသးခုကစီဥ(Lk 21: 20-28) အပူၚပထံဥဘဥ၀ဲ, ကစႈခရံဏစံး၀ဲဒဥယ အဂ့ႈဒ္အံၚယ မူခိဥအစိ အကမီၚ တဖဥန႔ဥယ ကကဟူးက၀းလီၚ. တုၚနုၚတစုယ ပွၚကထံဥဘဥယ ပွၚကညီဖိခြါအံၚယ ဟဲလ႕ တႈအ႕ဥအပူၚယ အိဥဒီးအစိအကမီၚယ ဒီးအလၚဒိဥအကပီၚထီန႔ဥလီၚ. ဒီးတုၚတႈန႔ဥ တဖဥမၚအသးဒီးယ မ့ႈတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚယ သုအမုႈအလါဘူးထီဥသတးဒီး ကြႈထီဥဒီး မိဏထီဥသုခိဥတက့ႈန႔ဥလီၚ.
ပွၚတနီၚနီၚသံကြႈ၀ဲဒဥယကစႈခရံဏကဟဲ၀ဲဒဥခံဘ်ီတဘ်ီအခါဖဲလဲဥန႔ဥအိဥ၀ဲယတနီၚနီၚအ့ဥ လိဏဆိးက့လိဏသးလ႕ကစႈခရံဏကဟဲ၀ဲအဂ့ႈယတနီၚနီၚဆိကမိဥကြႈ၀ဲဒီးပ်ံၚတႈဖုးတႈအိဥ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ.ဘဥဆဥယတႈလီၚတံႈလီၚဆဲးကတ႕ႈတမံၚန႔ဥယမ့ႈ၀ဲဒဥယပတသ့ဥညါဘဥကစႈ ခရံဏကဟဲ၀ဲဒဥခံဘ်ီတဘ်ီအဂ့ႈဘဥန႔ဥလီၚ.
တခ်ဳးကစႈခရံဏကဟဲ၀ဲဒဥအမဲဏညါယလႈဟီဥခိဥလိၚတႈကဘဥကဲထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥယမ့ႈအိဥ၀ဲဒဥယတႈအါကလုဏန႔ဥလီၚ.တႈပနီဥလီၚလးတဖဥကအိဥထီဥ၀ဲဒဥလ႕ယမုႈအလိၚယလါအလိၚယဒီးဆဥဧိၚဖီဧိၚအလိၚယဒီးတႈကီတႈခိဲယတႈကိႈတႈဂီၚကဘဥပွၚကညီးအလုဏကလုဏလ႕ဟီဥခိဥခ်႕န႔ဥလီၚ.ပွၚတနီၚနီၚစံး၀ဲဒဥယကစႈခရံဏကဟဲ၀ဲဒဥယအဆ႕ကတီႈအိဥဎံၚ၀ဲဒံးယတႈအဆ႕က တီႈအိဥအါဒံးအဃိယဖဲဒဥအသူဥအိဥသးအိဥ၀ဲအသိးယအိဥမူ၀ဲဒဥအတႈအိဥမူန႔ဥအိဥန႔ဥ လီၚ.
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈ (ပွၚတႈမ႕ဖိစီၚပ့ၚၾတဴးဒီးစီၚပီလူး အဘူဥနံၚ) (၂၉’၆’၂၀၂၁)